NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌ Pai အကောင်အထည်ဖော်ရေး ATSC 3.0 Start ထုတ်လွှင့်ရန်အဆိုပါနောပေး
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌ Pai ATSC 3.0 အကောင်အထည်ဖော် Start ထုတ်လွှင့်ရန်အဆိုပါနောပေး
FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌ Pai ATSC 3.0 အကောင်အထည်ဖော် Start ထုတ်လွှင့်ရန်အဆိုပါနောပေး
FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌ Ajit Pai သူနိုင်ငံ၏ထုတ်လွှင့်နေတဲ့တင်းကြပ်စွာမိမိဆန္ဒအလျောက်အခြေခံပေါ်မှာ ATSC 3.0 အဆင့်မြင့်စံအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စတင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအဆိုပြုထား Rulemaking တစ်သတိပြုပါဖြန့်ချိခဲ့သည်ကြာသပတေးနေ့ကကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ FCC သည်သို့မဟုတ်သာ 14 ကာလ၏ပဲ့မှာဖူးခဲ့သူ pai,, မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်အချိန်မဖြုန်းခဲ့ပြီးသူသည်ဤနှစ်ကုန်ကပိုပြီးတရားဝင်ကြေငြာခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ကြေညာချက်ထဲမှာ, FCC သည်ဆိုသည်ကား, "ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်အသနားခံတုံ့ပြန်မှာ FCC သည် ATSC 3.0 ပိုက Ultra High Definition (UHD) ရုပ်ပုံနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအသံ, enable တံ့သောနေဆဲ-In-ဖှံ့ဖွိုးတိုးထုတ်လွှင့်တီဗီစံချိန်စံညွှန်းများအတွက် rulemaking လုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေသည် ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆို programming ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုအဆင့်မြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတပ်လှန့်မှုစနစ် (EAS), ပိုကောင်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်း options နဲ့အပြန်အလှန်န်ဆောင်မှု။ "
ထုတ်လွှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ ATSC 1.0-based ဝန်ဆောင်မှုများကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှ FCC သည်အားဖြင့်အပိုဆောင်းအဆိုပြုချက်များနှင့်ကြေညာချက်များတို့တွင်ရှေ့ဆက်အတွက်အများပြည်သူမှတ်ချက်ပေးရန်စီစဉ်ထားသည့်ကိစ္စများနှင့်အဆိုပြုချက်များထဲတွင်စံ၏ဆန္ဒအလျောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း "ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒေသခံ simulcasting များ၏လိုအပ်ချက် အသစ်က ATSC 3.0 န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် FCC သည်အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း ATSC 1.0 ATSC 3.0 အချက်ပြမှုများကိုတင်ဆောင်သော်လည်းမဆက်လက်မလိုအပ်လိမ့်အဆိုပါ MVPDs အဆိုပြုထားပါသည်။ အဆိုပါ FCC သည်ကိုလည်း ATSC 3.0 တည်ဆဲ DTV စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တစ်စုံတစ်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ရှိမရှိအပေါ်မှတ်ချက်ရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါ FCC သည်ကိုလည်းအသစ်ကရုပ်မြင်သံကြားအသံဖမ်းတစ်ခု ATSC 3.0 tuner လုပ်ပိုင်ခွင့်ချမှတ်ရန်ဤအချိန်တွင်မလိုလားအပ်သောကြောင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နိဂုံးချုပ်များအတွက်တူညီလက်ရှိအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားတာဝန်ဝတ္တရားမှကိုင်ပြီး ATSC 3.0 ဘူတာအဆိုပြု၏။ "
အဆိုပါဆန္ဒအလျောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း၏သတင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အများအပြားကကြိုဆိုခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးကကြိုဆိုခဲ့သည်။ ဒန်းနစ် Wharton, ဆက်သွယ်ရေးအဘို့အ NAB ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌသူကပြောသည်ရသောအများပြည်သူကြေညာချက် လုပ်. ,
"NAB ပြင်းထန်စွာ FCC သည်ထုတ်လွှင့်တဲ့ Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်မြင်သံကြားပေါ် rulemaking နှင့်တစ်ခုလေးပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအမိန့်မှသိသာအရေးပါမှုနှစ်ခုတရားစွဲဆိုမှုအပေါ်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားထောက်ခံပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းများ, နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လူနည်းစုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပိုင်ရှင်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးပွားစေခြင်း, စားသုံးသူများအတွက်အသစ်နှင့်ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးလိမ့်မယ် "ဟုဒဲနစ် Wharton, အ NAB များအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးကကြေညာချက်ထဲမှာကဆိုသည်။ "ဥက္ကဋ္ဌ Pai ရီပတ်ဘလီကန်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ထိန်းချုပ်ထားသောကော်မရှင်နှစ်ဦးစလုံး၏အတိတ်အလေ့အကျင့်ကနေထွက်ခွာနှင့်လူသိရှင်ကြား FCC သည် rulemaking လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သာ. ကြီးမြတ်င့်လင်းမြင်သာထိုးသွင်းဖို့စောစောအဆိုပြုချက်လွှတ်ဘို့အကြွေးထိုက်တန်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဤ action ကိုကာယကံရှင်များနှင့်ရှေ့ဆက်သွား FCC သည်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျအများပြည်သူထံမှ သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်မှုအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပေးသွားမှာပါယုံကြည်ပါတယ်။ "
ထုတ်လွှင့် Beats ၏တရားဝင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် အဆိုပါ 2017 များအတွက် LIVE NAB ပြရန် in Las Vegas မှ။ 2016 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့် 1.3 သန်းကြည့်ရှုခဲ့! အဆိုပါပြပွဲအများစု In-depth ကိုလွှမ်းခြုံအဖြစ်အမြင်နှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းများအတွက် ... မှာညှိဖို့သေချာပါစေ broadcastbeat.com
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး	2017-02-02
ယခင်: နှစ်ဦးကရေဒီယိုအသံလွှင့် Giants, CBS ကရေဒီယိုနှင့် Entercom, သူတို့ကပေါင်းခြင်းနေကြေညာ
နောက်တစ်ခု: NAB 2017 မှာဆုချီးမြှင့်သူဟာ Emmy Award ဆု Winner အမေရိကတိုက် Ferrara အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆုချီးမြှင့်ရန် NAB
Atomos Timecode စနစ်များကိုရယူခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်သည့် Multicamera Content Creation ကိုဆိုလိုသည်
အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းနှစ် ဦး နှင့်အတူနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 300 အားကစားပွဲများထက်ဟားဗတ်ပိုမိုအသံလွှင့်ပုံ